accessiBe: Using Artificial Intelligence To Tackle Site Accessibility | Martech Zone
Ulo oru mgbasa ozi nke Social Media | Amalite na Machị 1, 2021 | Omume mebere
accessiBe: Iji Amamịghe echiche Iji mee nnweta saịtị
Sọnde, Febụwarị 21, 2021 Tuesday, February 23, 2021 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 3 nkeji
Ọ bụ ezie na iwu maka nnweta saịtị abanyela kemgbe ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ anaghị eme ngwa ngwa. Ekwetaghị m na ọ bụ ihe nke ọmịiko ma ọ bụ ọmịiko n'akụkụ nke ụlọ ọrụ… M kwenyere n'ezie na ụlọ ọrụ na-nanị mgba na-elu.
Dị ka ihe atụ, Martech Zone na-edozi nke ọma maka nnweta ya. Ka oge na-aga, ana m arụ ọrụ iji melite ma nzuzo, imewe, na metadata dị mkpa… mana enweghị m ike ijide naanị ịdebe ọdịnaya m na ibipụta oge niile. M na-enweghị ndị revenue ma ọ bụ mkpara na-na n'elu ihe niile m kwesịrị ugbua… M nanị na-eme ihe kasị mma m nwere ike.
Ekwetaghị m na m bụ naanị ebe a… n'eziokwu ọnụọgụ ndị ahụ na-eju anya mgbe ị nyochara weebụ yana nnabata ụkpụrụ nnweta:
Nnyocha nke nde peeji mbụ kachasị na weebụ na-eme atụmatụ na ọ bụ nanị 1 pasent na-agbaso ụkpụrụ nnweta ịnweta ọtụtụ.
Gịnị Bụ nnweta? Kedu ihe bụ ụkpụrụ?
Ntuziaka Nweta Ọdịnaya Weebụ (WCAG) kọwaa otu esi eme ka ọdịnaya ndị dijitalụ nwee ike inweta ndị nwere nkwarụ. Nnweta nwere ọtụtụ nkwarụ:
visual Nkwarụ - gụnyere ikpu ìsì zuru oke ma ọ bụ nke ezughị ezu, isi ìsì, yana ikike ịkpa ókè iji gosipụta ihe dị iche.
Nkwarụ ụlọ akwụkwọ - gụnyere ntị chiri ma ọ bụ nke ọkara.
Nkwarụ anụ ahụ - gụnyere ike ịmekọrịta na dijitalụ dijitalụ site na ngwaike ndị ọzọ karịa ụdị ọrụ njirimara onye ọrụ dịka keyboard ma ọ bụ òké.
Nkwarụ okwu - gụnyere ikike ịmekọrịta na dijitalụ dijitalụ site na ikwu okwu. Ndị nwere nkwarụ nwere ike ịnwe nsogbu ikwu okwu nke na-ama usoro ndị ọgbara aka aka ma ọ bụ nwere ike ha enweghị ike ikwu okwu ma chọọ ụdị ọrụ ndị ọzọ.
Nkwarụ uche - ọnọdụ ma ọ bụ nkwarụ ndị na-egbochi usoro ọgụgụ isi mmadụ, gụnyere ncheta, nlebara anya, ma ọ bụ nghọta.
Nkwarụ asụsụ - gụnyere nsogbu ịma aka nke asụsụ na mmuta.
Nkwarụ mmụta - gụnyere ike ịnyagharịa n'ụzọ dị irè na idowe ozi.
Nkwarụ akwara - gụnyere ikike ịmekọrịta na weebụsaịtị ma ọ bụrụ na ọdịnaya emetụtaghị ya. Ihe atụ nwere ike ịbụ visuals na-ebute ọdịdọ.
Kedu ihe ndị mejupụtara Digital Media gụnyere Nnweta?
Nnweta abụghị otu ihe, ọ bụ ngwakọta nke njirimara ihu njirimara njirimara na ozi ewepụtara:
Usoro Nhazi Ọdịnaya - nyiwe tinye iji zụlite ahụmịhe onye ọrụ. Ihe ntanetị ndị a kwesịrị ịnabata nhọrọ nnweta.
content - ozi dị na ibe weebụ ma ọ bụ ngwa weebụ, gụnyere ederede, onyonyo, na ụda yana koodu ma ọ bụ akara nke na-akọwa ma usoro ma ngosi.
Ndị ọrụ-Ndị ọrụ - interface ejiri tinye na iji ọdịnaya. Nke a gụnyere nchọgharị, ngwa, na ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi.
Nyere aka na teknụzụ - ndị na-agụ ihuenyo, keyboards ndị ọzọ, switches, na sọftụwia nyocha nke ndị nwere nkwarụ na-eji eso onye ọrụ ha emekọrịta ihe.
Ngwa nyocha - ngwa nyocha nnweta websaịtị, ndị nyocha HTML, ndị nyocha CSS, ndị na-enye nzaghachi nye ụlọ ọrụ otu esi melite nnweta saịtị ahụ yana ụdị ọkwa gị bụ.
AccessiBe: Incorporating AI maka Nnweta
Amamịghe echiche (AI) na-egosi na ọ na-abawanye uru na ụzọ anyị na-atụghị anya ya… na nnweta ugbu a bụ otu n'ime ha. accessiBe jikọtara ngwa abụọ nke jikọtara ọnụ wee nweta nkwado zuru oke:
An interface nweta maka mgbanwe UI niile na imewe metụtara ya.
An AI-kwadoro ndabere iji hazie ma mezie ihe ndị dị mgbagwoju anya - njikarịcha maka ndị na-agụ ihuenyo na igodo igodo.
A bụ ihe nnyocha video:
-enweghị accessiBe, a na-eji aka ejiri aka arụ ọrụ usoro ntanetị ntanetị. Nke a na-ewe izu ma na-efu ọtụtụ iri puku dollar. Mana ihe kachasị gbasara nhazi akwụkwọ bụ na ozugbo ọ gwụchara, ọ na-emebi nke nta nke nta n'ihi ihe nchọgharị, CMS, na n'ezie, mmelite weebụ. N'ime ọnwa ole na ole, a chọrọ ọrụ ọhụrụ.
na accessiBe, usoro a dị mfe karị:
Ikike nnweta ahụ na-egosi ozugbo na webụsaịtị gị.
accessiBe'AI na-amalite nyocha na nyochaa ebe nrụọrụ weebụ gị.
N'ime oge 48, a ga-enweta weebụsaịtị gị ma kwenye na WCAG 2.1, ADA Title III, Nkebi 508, na EAA / EN 301549.
Oge 24 ọ bụla, AI na-enyocha ihe ọhụụ na edezigharị iji dozie.
Llgba ọtụtụ puku dollar ọtụtụ ugboro n'afọ abụghị ihe ọtụtụ azụmaahịa nwere ike imeli. Site n'ime ka nnweta websaịtị ịgbalị, enweghị ọnụ, ma na - echekwa - accessiBe agbanwe egwuregwu.
accessiBe awade a Ngwado Nkwado Litgba akwụkwọ na-akwụghị ụgwọ ọ bụla, ma ọ bụrụ na agbagha nnabata webụsaịtị gị. Tinyere nlebara anya nke aka ha, ngwugwu a gunyere oditi ndi okacha-amara, akuko, ihe eji aka nweta, nnabata nkwado nke nkwado, ntuziaka, na ndi ozo.
Mụtakwuo Banye na Free
Tags: acessibeAda Ada IIIaiAmamịghe echichennweta nnwetankwarụ auditoryakpịrị nwetankwarụ cognitivennweta asụsụnkwarụ asụsụenweghi ike ịnwetankwarụ akwaraaru nnwetankwarụNkebi nke 508nnweta okwunkwarụ ikwu okwuvisibility nwetankwarụ anyaikpaWCAG 2.1nnweta weebụntuziaka nnweta ọdịnaya weebụ
Froala: Jiri WYSIWYG Ọgụgụ Ederede Ederede Na-ewuli elu Gị
Otu m si mebie aha ọma m na Social Media… Na Ihe I Kwesịrị Learnmụta Na Ya
Mmadụ Bịa ka Martech Zone
Watch vidio banyere Douglas Karr, ọrụ ya, ụlọ ọrụ ya, na onyinye ya.
Kpọtụrụ Douglas Karr
Categories Họrọ Atiya Teknụzụ Mgbasa Ozi Nchịkọta & Ule content Marketing Njikwa Mmekọrịta Ndị Ahịa na Platform Data Ecommerce na etalọ nkwari akụ Ahịa Email & Email Marketing Automation Teknụzụ na-apụta Mmemme Azụmaahịa Vidio Ahịa & Ahịa Akwụkwọ Ahịa Ihe omume Infographics Ahịa Ngwaahịa Ahịa Ọzụzụ Azụmaahịa Mobile na Mbadamba ụrọ Mmekọrịta ọhaneze Nkwado ire ahịa Chọọ Marketing Social Media Marketing
Mary Koberstein: Otu esi emezu nhazi nke onwe-ozo iji zuo oke ahụmịhe ndị ahịa
na nke a Martech Zone Ajụjụ ọnụ, anyị na-agwa Mary Koberstein, Director nke Integrated Marketing na Ahụmahụ Nlekọta Ọrụ na Avionos. Mary na-enyere ndị mmekọ aka ịkọwa atụmatụ atụmatụ ịga ahịa, na-ebulite mmepe azụmaahịa ọhụụ, wuo ụzọ kacha mma iji nyefee ma jikwaa mmekọrịta ndị ahịa maka CMS, nyocha, ịhazi onwe ya, akpaaka ahịa na azụmaahịa ahịa dijitalụ. Ndị ahịa na-atụ anya ịhazi onwe - n'eziokwu,…
Kyle Hamer: Etu esi ewulite ahia na ire ahia
na nke a Martech Zone Ajụjụ ọnụ, anyị na-agwa Kyle Hamer, onye isi nke Hamer Marketing Group. Kyle ghọrọ onye na-ere ahịa site n'ụzọ anyị na-anaghị atụ anya ... site na ahịa. Anyị na-atụle etu ahịa na azụmaahịa, mgbe a haziri ahazi na usoro, si rụọ ọrụ dị mma karịa otu ndị otu ọdịnala. Kyle na-enye nghọta n'ime ihe ndị ahịa…
Stephanie Cox: Otu Marketingzụ ahịa, Ahịa, Ọrụ, na Nkwado Nkwado si agbanwe Ahụmịhe Ndị Ahịa
na nke a Martech Zone Ajụjụ ọnụ, anyị na-agwa Stephanie Cox, onye isi oche nke Ahịa na Ahịa na Lumavate. Corlọ ọrụ nwere olile anya ịgbanwe nzukọ ha ga-agbanwerịrị ahụmịhe ndị ahịa niile. Stephanie na-atụle "ihe niile na-emetụ ndị ahịa aka" na Lumavate - ahịa, ọrịre, ọrụ na nkwado - yana etu esi jikọta ihe niile metụtara azụmahịa. Stephanie…
Hunter Hastings: Ohere di na Nsogbu na otu ndi ahia na ndi ahia gha agha
na nke a Martech Zone Ajụjụ ọnụ, anyị na-agwa Hunter Hastings okwu, onye na-ere ahịa site na ọrụ na akụnụba na-enyere aka n'ịkụziri ndị isi azụmahịa na azụmaahịa maka Mises Institute. Anyị na-atụle ihe ịma aka na ohere ndị azụmaahịa ga-enwe n'imeri ọrịa na mgbanwe na azụmaahịa na omume ndị ahịa jiri ya. Na…
Erin Jordan Spanski: Igodo atọ mgbe ị na-ahọpụta B2B Marketing Agency
na nke a Martech Zone Ajụjụ ọnụ, anyị na-agwa Onye isi oche na Onye Mmekọ na Walker Sands. Erin bụ ezigbo onye ọrụ mmekọrịta ọhaneze na azụmaahịa nwere agụụ maka inyere ụlọ ọrụ teknụzụ B2B aka. Anyị na-atụle mkpịsị ugodi atọ iji nwee ihe ịga nke ọma mgbe ịhọrọ na-arụ ọrụ na B2B Marketing Agency. Site na atụmatụ igbu, Walker Sands…
Jack Klemeyer: Ndi ndu ahia nke ogha n’iru
Na ihe omume a, anyị gbara ajụjụ ọnụ Jack Klemeyer, onye ọga ahịa azụmaahịa nwere afọ 25. Jack na-enye nghọta ya banyere ọdịnihu akụ na ụba a na-ejighị n'aka nke azụmaahịa yana etu ndị isi kwesịrị isi meghachi omume, meghachi omume, ma nwee ọganiihu. N'ime ihe omume a, anyị na-atụle ụfọdụ isi okwu dị nso na nke dị oke obi nye ndị ndu n'oge nsogbu a…
Janet Mesh: Permezu Agile Marketing na Ndenye Pivot
na nke a Martech Zone Ajụjụ ọnụ, anyị na-agwa Janet Mesh, onye isi na Co-guzobere Aimtal. Janet bụ onye na-akwado na ịre ahịa agile na ndị otu ya na ndị ahịa mpụga. Na kwa ụbọchị (mebere) nkwụsi ike, ngwanrọ ngwanrọ, yana kwa izu, Janet na ndị otu ya emezuola Ndenye Pivot, usoro iji usoro dị mkpa based
Ọ bụrụ na azụmahịa gị ma ọ bụ nke azụmahịa gị na-alụ ọgụ site na ọrịa na mkpọchi mkpọchi, ị nwere ike chọọ ịrụ ọrụ ụfọdụ ...
Ọ bụ ihe mara mma na m na-asụ ude mgbe m hụrụ ụfọdụ isiokwu na-ekwujọ Millennials ma ọ bụ na-eme ụfọdụ ụdị egwu ọzọ ...
Etu esi chepụta, dee, ma bipụta akwụkwọ ọgụgụ gị site na iji akwụkwọ Google
Ọ bụrụ n'ịga n'okporo ụzọ edere na ibipụta akwụkwọ ebook, ị maara ịma ụdị faịlụ EPUB, ntụgharị ...
Kedu ihe bụ Web Wee Ọchịchịrị, Web Weebụ, na Mkpa / Weepu Weebụ?
Anyị anaghị ekwukarị banyere ịntanetị ma ọ bụ Web Gbara Ọchịchịrị. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ mere ezigbo ọrụ nke ịchekwa ihe dị n'ime ...
© Copyright 2020 DK New Media, Ikike niile echekwabara
Ahịa Email & Email Marketing Automation